Ngaphambi kokonyulwa kwentloko ye-UCP: ulutsha - utshintsho, abadala - iLebedko - HienaLouca
Ngaphambi kokonyulwa kwentloko ye-United Civil Party: ulutsha - utshintsho, abadala-kuLebedko
Julayi 5, 2018 Dianne Reeves iindaba
Ngomhla wokunyulwa kosihlalo omtsha we-United Civil Party kwizakhiwo zenziwa ngokuzikhethela: ulutsha ngokutshintshwa, kunye nabadala bexesha le-status quo.
IKomidi yokuHlanganisa ye-congress-electoral congress ye-United Civil Party, eya kuqhutywa ngo-8 Julayi, yabamba intlanganiso yayo yokugqibela ngomhla we-5 kaJulayi.
Kulo, ezinye izakhiwo zenkampani zivakalise izikhundla zabo malunga nenkxaso yabaviwa kwisithuba sosihlalo weqela. Kufunwa ngamane: Anatoly Lebedko, ngubani osihlalo we-UCP ye-18 iminyaka elandelelanayo, kunye ne-deputy yakhe Vasily Polyakov, intloko yombutho weqela laseMoscow Nikolay Kozlov kunye nekelakela leNdlu yabameli Anna Konopatskaya.
Ulutsha - ngokutshintsha
Ngaloo ndlela, ibhunga eliphambili lombutho wolutsha lwe-UCP ulutsha oluninzi lwamaDokhrasi luchaza inkxaso kaVasily Polyakov.
"Xa umbono wethu, kuba Vasily Polyakov, ngaphezu nabani na ongomnye labaviwa nako ukwenza izinto eziyimfuneko ukuze ukuvuselelwa kunye nophuhliso iqela iinguqu yangaphakathi", - uthe kwingxelo lombutho kulutsha unyulo usihlalo United Civil Party.
Ngaphambili, "abaDemokhrasi abaselula" cetywayo UAnatoly Lebedko uhoxise u-candidate ukhetho lwe-8 kaJulayi.
Abadala - ngoLebedko
Sihlalo we-Honorary of UCP Stanislav Bogdankevich Azisa isikhundla "esidityanisiweyo 'abadala iqela, kubandakanywa Zinaida Bondarenko, nguVasili Shlyndikov, uYuri Khaschevatsky, Lev Margolin, Anatoly Pavlov kunye nabanye. Baxhasa Lebedko kwaye lukholelwa ekubeni eli qela kufuneka inamathele isicwangciso yayo yangoku.
"Mna ndibona ukuba yeyiphi abalingwa ukuze ngokuphandle njengoko Anatoly, ndithetha inyaniso wangumlawuli ebusweni. Ngubani aye ipikethi kwiofisi yomtshutshisi okanye ulawulo kamongameli, ababeza bema emnyango, ukuba alungiselele nomxokelelwane abantu abachaphazelekayo kwaye ngaphezulu ", - wathi Freedom Bahdankevich.
Ingxelo malunga nokuthatha inxaxheba kukaLebedko kwintlanganiso yeqela yavela kwiwebhusayithi esemthethweni ye-UCP 26 Juni. Ngaphambili, wayethetha ngokuphindaphindiweyo ukuba akayi kugijima kwi-post of leader of party.
Kwi-charter ye-UCP akukho mingcipheko malunga nemigangatho emininzi yenkampani inokukhokelela ngumntu ofanayo.
Iziganeko ezitshintshe i-svaboda.org
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-148, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
UClaude Lanzmann, umbhali wecandelo elidumileyo kwiidrama-movie ezidumileyo malunga neNkohlakalo, yafa.
Intloko ye-mission yase-United States isuka eBelarus. Mackay wambulela
Wafa owayengummangalelwa wase-Ukraine kunye nomphathi wezopolitiko uLevko Lukyanenko
EMoscow, ukukhangela i-movie ethi "Loznitsa" uDonbas yaxoshwa. "Izizathu zobugcisa"
UBorisov uya kuvivinywa ngu-colonel, owafihla inyaniso yolu lwaphulo-mthetho ngenxa yokukhwaza
NjengamaMangcwaba aseMinsk eMinsk, ntshabalalisa amathuna amandulo
Ummeli kunye nefotoshi yeLukashenko kunye neeflegi ze-rainbow eza kwiPalamente yaseYurophu
Abathathi Bama-Without Borders babonisa inkxalabo malunga nosongelo kumhleli we-Charter-97
Post Previous:Omntu ohlala eBelarus uneemoto ze-0,31
Okulandelayo Post:Ummi waseMinsk wadlwengulwa waza wabulala intombazana eneminyaka eyi-20, wafihla isidumbu sakhe kwi-sofa
Ihlobo lifikile - amantombazana ahamba ngeenxa zonke emhlabeni ... (17)